October 2013 - Vanoda Zvinhu
Mutambo wevanhu vakuru: Zvinonaka
Ndakange ndapedza basa rangu uri musi wefriday ndananga zvangu kurengi kunokwirirwa mabhazi ekuHighfield kwandinogara. Dzakanga dziri kuma5 apa ndakanga ndakapera semunhu akanga aswera achikanya zvidhina. Ndakasvika parank pakadzudza navanhu, munongozivavoka pick-hour, apa ndaitofunga zvangu kuti ndaizobika chii sezvo ndaive ndichiri bacheor ukuwo young brother yangu yakanga yadzokera kuchikoro…
I was 23 years old and had graduated with a teaching degree from UZ. Even though they said mine was a teaching degree, I wasn’t so keen on joining the profession, unless of course I was going to teach at a boys’ school like Prince Edward or Allan…
Kuongorora marudzi anonaka kusvirana nawo kuvanhukadzi
Let us examine different regions in Zim toona ku vakadzi in general vakamira sei. (Vakadzi kana muchida pinduraiwo indicating kuti varume vemarudzi akasisiya vanoita sei pakusvirana) (1) Ndotanga neku Binga chaiko kune maTonga. Munozviziva here kuti vakadzi ava ndivo vakatanga kukwira pamusoro pevarume(reverse missionary position). Vazhinji vacho vanochemerera…
Dhuma dhuma na Anna Mubhazi, maihwe sviro ndoida zvangu
Ndakatanga kuwirirana naAnna mumwe musi mabhazi achinetsa. Ndainge ndakabopa suit yangu yeblack ndisina kusunga tie. I was just looking cool. Anna aiva chisikana chipfupi pfupi, ari mutsvuku plus ane human hair. Takangowirirana pasina pfungwa yekuti tichazosvirana rimwe remazuva. Takagara tese mubhazi,ndokupanana macell numbers. Pakutanga ndaitya kutaura naye ndichiti…
“Handei ku Hatcliffe!!”, akadaidzira hwindi. Apa this was kuma 11pm. Ini i was coming from watching a movie nebhebhi rangu yakanga yatanga na 8:30pm ku Kine 1. We had gone there on a double date with a friend yainzi Mangwiro and his girl. “Itai five – five sezvigunwe…
MAZAMBIAN KUNAVEDU IMU. ANOIITA KUTI TAPI TAPI TAPI TAPI Pandakadaira phone yangu ndakanyatsonzwa kuti iri voice neka ascend aka hakasi kumu Zimbabwean chaiye. Ndakabva ndangoti auye pabasa pangu and nenguva isipi akangoti godi kusvika pagedhi nekano kaSubaru b4. Mwana anga akabatana iyeye veduwe. Zvangu zvino zvekujaidza mboro izvozvi…
Kusvira mukadzi waBoss. Dont try this at your workplace
Boss vangu nemukadzi wavo are the directors of the company. Mukadzi anovava iyeye. Akatanga kupopota unoita sekunge uchatiza. One day ndakanzwa vachipopotedzan­a nemurume pa4n, zvkanzi ‘iyezvino wane 3months usina kumbondisvira ndichiri mukadzi wako here kana kuti kwete?’ ndakabva ndaziva kuti zemo ndoririkuvapa hasha. One day ndakazvipira kuvadenha and…
Kusvirwa naBamudiki Sweetman
Ndakafumogeza kuseni seni ndokunobata bhazi raMayambara raipfuura nepamusha pedu kuma7 richibva paShurugwi chaipo. Handina zvizhinji zvandafunga kunze kwekuti dai zvinhu zvanondifambirawo kuHarare mari dzepenjeni yababa Ronia yabuda. Kubva zvavakarohwa nemotokari vari pamudhudhudhu vari pabasa vachibva vangofira ipapo, hapana kana sendi repenjeni randange ndambopiwa. Ndaive ndatopedza gore rese ndichizvifambira.…
It was one of those days when your mind is blank .. because you are too poor to think And too hungry to concentrate .It’s just been month end apa mari yapera nezvikwereti …the landlady is hovering on her verandah and I knew instinctively she wanted her rent…
Kusvigwa kwandakaitwa kuseminar(copied)
Vanhuwee handina kumboziva kuti kunze uku kune vamwe varume vane mboro. Dziya dzinonzi mboro, muzvambarara pandakaitarisa ndakati inga zvavo amai vababa ava vari kudya.Zvakatanga taenda kubusiness meeting kuSheraton baba ava actually ngativati Clever. aingonditarisa pandaive ndakagara achiti amai ava ndavada.Ini that day I was looking gorgeous vasikana.Ndaive ndatenge kamwe kaperfume kanhuhwirira chose.Apa musoro…